2021Best Forex အမြတ်အတွက် ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ - အမြတ်နှင့်အားနည်းချက်ကိုဖော်ထုတ်
အကောင်းဆုံး Forex EAs 2021
1 စက်တင်ဘာလ 2020 | နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20 ဇန်နဝါရီလ 2021
Forex EAs များသည်ယခုအချိန်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားလုံးတွင်လွှမ်းမိုးနေပုံရသည် - နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၏အဆိုကိုထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ EA ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားပါက၎င်းတို့သည် passive ၀ င်ငွေအတွက်ကျမ်းပိုဒ်ကိုပေးသည်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ Forex EA သည် Forex market Personal Assistant အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် EA သည်သင့်ကိုယ်စား Forex ကို ၀ ယ် / ရောင်းချနိုင်သည်။ အချို့ကုန်သည်များသည် Semi-automated အတွေ့အကြုံကိုရွေးချယ်ကြပြီးဆိုလိုသည်မှာအချို့သော EAs filter နှင့် feature settings ကိုချိန်ညှိပြီး၎င်းကို run ရန်ဖြစ်သည်။
အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့အတွေ့အကြုံရလိုပြီးအလိုအလျောက် Forex EA ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်သူတို့လိုချင်သည့်အတိုင်းကုန်သွယ်ရန်အချိန်သိပ်မရှိသည့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင်ဤချိန်ညှိချက်သည်မတည်ငြိမ်သော Forex trading လောကတွင်မည်သည့်နေရာ၌စတင်ရမည်ကိုမသိသောကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင် Forex EAs အတွက်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားပါသည်။ ၄ င်းတွင်၎င်းတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီဘာကိုဂရုစိုက်ရမည်၊ နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံး Forex EAs ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Forex EA ဆိုတာဘာလဲ။
အတွက်ကုန်သွယ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Forex ဈေးကွက် (နှင့်မည်သည့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္)) သည်ဘောလုံးကိုသုတေသနနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေကြေးစျေးကွက်တွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္newsာရေးဆိုင်ရာသတင်းများနှင့်အညီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအချိန်များစွာပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
များစွာသော Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အချိန်ပြည့်ကုန်သွယ်မှုပြုကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီမံချက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်သုတေသနမှတစ်ဆင့် Forex စျေးကွက်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်တစ်ရက်လျှင် ၇ နာရီရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
အခြားအတိုင်းအတာအရ Forex market ကိုထိရောက်စွာသင်ယူရန်အချိန်မရှိသောကုန်သည်များလည်းရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်များတဲ့ကမ္ဘာမှာနေထိုင်ကြတယ်၊ ဒီနေရာမှာအလိုအလျောက် EA နည်းပညာဝင်လာတယ်။
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမို Forex ကုန်သည်များသည်ဤမျက်နှာစာစနစ်များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုမတင်စရာမလိုဘဲအဆုံးမှအဆုံးသို့ Forex ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်လုပ်ရမည့်အရာတစ်ခုမှာရန်ပုံငွေအချို့ကိုသင်၏ပွဲစားစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်း၊ စက်ရုပ်ကိုတင်ခြင်း၊ သင်၏ဘဝကိုသင်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Forex EA သည်သင့်အတွက်အရာရာကိုစီမံပေးလိမ့်မည်။
Forex EAs ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ Forex EA သည်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော algorithms ကိုအသုံးပြုသည်။ EA သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုရှာဖွေနေသည့် Forex Market ကိုရှာဖွေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်စေပြီးကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်နည်းဗျူဟာအပေါ်အခြေခံသည်။ Forex EA ကိုကုန်သွယ်ရန်အသုံးပြုခြင်း၏ရှင်းလင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာ ၄ င်း၏ရာထူးများကို ၂၄/၇ တွင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြရန်မကုန်သွယ်စိတ်ခံစားမှု၏သိသာမရှိခြင်း။ နောက်ထပ်လာမယ့်အကြောင်း။
Forex EA ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
ဤအချက်အားဖြင့်သင်သိသော forex EA များသည်သင်ဘာလုပ်စရာမလိုဘဲ Forex ကိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Forex EA ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမရောင်းနိုင်သေးပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကုန်သွယ်ရေးတွင် EA ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကြီးမားသောကမ္ဘာ့စျေးကွက် Forex ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းသည်စျေးနှုန်းဇယားများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များမည်သို့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်အချိန်ကုန်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်လပေါင်းများစွာမှ စတင်၍ ကုန်သွယ်ရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ဆိုသည်မှာအလွန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး Forex EAs စျေးနှုန်းများ၊ ဇယားများနှင့်ညွှန်းကိန်းများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Forex EA သည်ကုန်သည်များအား Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်ပါဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်ထိုင်။ အနားယူရုံသာရှိသည်။
Forex EAs များသည်ဤနေရာတွင်လည်းထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာစနစ်သည်လူသားများလုပ်ဆောင်ရန် ၈ နာရီအိပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်ဟာ Forex အချိန်ပြည့်ကုန်သွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်၏မဟာဗျူဟာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၆ နာရီနှင့်သင်၏တွေ့ရှိချက်အပေါ် ၃ နာရီပါဝင်ခြင်းပါဝင်သည်။
သင်၏မဟာဗျူဟာကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်အသုံးပြုသော ၉ နာရီသည်အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်သည် - ၂၄ နာရီသုတေသနပြုနိုင်လျှင်သင်မည်မျှအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ တိုင်း တစ်ရက်?
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အနားယူရန်နှင့်အိပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Forex EA သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို ၂၄/၇ ပြည့်မီစေနိုင်သည်။
ဤသည်သည်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်သော်လည်းကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လွတ်မခံလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်အချိန်ပြည့်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာအပြင်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့အစုရှယ်ယာအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ခံစားမှုများကိုသင့်အားဖယ်ရှားပစ်ခြင်းသည်တရားမ ၀ င်သောကုန်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချစေနိုင်သည်။
Forex EA တွင်ထိုပြproblemနာမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာအနက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ယုတ္တိရှိပြီးတိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်းကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့်နံပါတ်များကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုသီအိုရီအရလိုက်နာရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။
ငါတို့ပြောပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် Forex EAs တွေမှာအိပ်စရာမလိုဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ EA သည်သင်လုပ်စရာမလိုဘဲနှင့်အဆုံးမဲ့ငွေပမာဏကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
၎င်းသည် 'ကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏ jack - master of none' ဟုပြောခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမြောက်အများကိုထိထိရောက်ရောက်သုတေသနပြုရန်နှင့်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါးရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလက်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Forex EAs သည်လူကုန်သည်များနည်းတူကန့်သတ်မထားပါ။ ဤခေတ်မီဆန်းပြားသည့် software သည်စျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
Forex EA သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအဖြေမရှိပါ - Forex EAs ၂ ခုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သော Forex EA ပံ့ပိုးသူများသည်ကော်မရှင်အခြေပြုဖွဲ့စည်းပုံကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင့်ကိုယ်စားပြုလုပ်သောအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီမှပလက်ဖောင်းသည်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသောကော်မရှင် (ရာခိုင်နှုန်းပုံစံဖြင့်) ယူလိမ့်မည်။
ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ သင်ရွေးချယ်သော Forex EA ပံ့ပိုးသူသည်ကော်မရှင် ၁၀% လိုအပ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကို Forex EA platform သို့ငွေသွင်းပါမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်
ကုန်သွယ်မှု ၈၀ ကိုတစ်လအတွင်းပြုလုပ်သည်
ROI က ၁၂% ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၁၈၀ ပါ
ထို့နောက်ပံ့ပိုးသူသည်ကော်မရှင်၏ ၁၀% ကိုဒေါ်လာ ၁၈ နှင့်ညီသည်
သင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၆၂ နဲ့အမြတ်အစွန်းမှာထားခဲ့မယ်
ဤကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ ကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်သောအခါ EA ပလက်ဖောင်းသည်အမြတ်အစွန်းသာရလိမ့်မည်။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, သင်၏ ROI တိုးမြှင့်ဖို့သတိထားကုန်သွယ်နေရာ EA developer များ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲပုံစံဖြင့် Forex EA ရရှိရန်သင်တစ်ကြိမ်သာငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အား activation link တစ်ခုကိုအီးမေးလ်ပို့သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် EA system ကို MetaTrader4 သို့မဟုတ် MetaTrader ကဲ့သို့သော third-party ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောထုတ်ကုန်အတွက်သင်အခြေခံထုတ်ကုန်ကိုပိုင်ဆိုင်သည့်အတွက်ကော်မရှင်မရှိတော့ပါ။
ဤနေရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဆိုးကျိုးမှာသင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ သို့သော်အကောင်းဆုံးသော Forex EAs များမှာအခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်သုံးစွဲသူများကို ၂၄/၇ ပံ့ပိုးမှုပေးသောကြောင့်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်မဟုတ်ပါ။
Forex EAs သည်အသုံးပြုရန်လုံခြုံပါသလား။
ထောင်နှင့်ချီသောပံ့ပိုးသူများသည်ကုန်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရန်ကြိုးစားနေကြပြီးအမြတ်အစွန်းနှင့်အမြတ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုမပေးနိုင်သောရလဒ်များကိုပေးကြသည်။
အခွင့်အလမ်းတွေကိုဒီဆိုဒ်များအတုအယောင်များမှာဖြစ်ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောဝေးကွာသောရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းပေးသောမည်သည့်ပံ့ပိုးသူမဆိုအပြစ်မဲ့ကုန်သည်များအားကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကြိုးစားနေသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတချို့ကုန်သည်တွေကဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာသိပ်နောက်ကျမယ့်အချိန်မတိုင်ခင်အထိအခြေအမြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့မတွေ့ကြဘူး၊ သူတို့ပိုက်ဆံတွေကိုနမ်းလိုက်ကြပြီ။
အကယ်၍ သင်ပံ့ပိုးသူနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာပါကသုတေသနပြုပါ။ အခမဲ့စမ်းသပ်ကာလသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံပြန်ပေးရန်အာမခံချက်ကိုပေးသောစင်မြင့်သို့ ၀ င်ခြင်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသည်။ အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကကွဲသွားပြီဆိုရင်တော့သင်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏ငွေများကိုထိခိုက်လွယ်စေခြင်းမပြုဘဲ ၀ င်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်လျော်သော Forex EA ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
အနည်းဆုံးတော့ Forex EA လိမ်လည်သူများကိုသိရှိခြင်းကြောင့်ကုန်သည်များသည်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အားသာချက်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်းရုံမသမာဝက်ဘ်ဆိုက်များအမြဲရှိလိမ့်မည်။ သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။
ထိုစိတ်ထားဖြင့် Forex EA ကိုမ ၀ ယ်မီအောက်ပါအချက်များကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
Forex EA တောင်းဆိုချက်များစစ်မှန်ပါသလား။
လစဉ်ကြေး ၉၀% ထပ်မံပေးမည်ဟုကတိပြုရန်လွယ်ကူသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မည်သူမဆို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ပြီးလကိုတုတ်တစ်ချောင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် 'မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့ဖြစ်လျှင်ဖြစ်နိုင်မည်' ဖြစ်သည်။
သင်ကြည့်နေသော Forex EA ပလက်ဖောင်းသည်လအနည်းငယ်အမြတ်အစွန်းကြီးမားသောစွန့်စားမှုနှင့်ကတိပြုလျှင်၎င်းသည်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံကိုမြှင့်တင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရရှိသောရလဒ်များအတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုသော Forex EAs ကိုရွေးချယ်ရန်ကောင်းသည်။
Forex EA ကုန်သွယ်ရေးသရုပ်ပြအကောင့်များသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့်ကုန်သည်အသစ်များအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အလိုအလျောက်အချက်ပြမှုနှင့်စစ်ခြင်းချိန်ညှိချက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကုမ္ပဏီ၏တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုရလဒ်များနှင့်စစ်ဆေးမှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယား Forex EA ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလုပ်ဆောင်ပုံကိုသရုပ်ဖော်သည်။ စစ်မှန်သောပလက်ဖောင်းသည်ဤအသုံး ၀ င်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်နှင့်စျေးကွက်တွင်မသင့်တော်ကြောင်းသက်သေပြရန်ဖြစ်သည်။
အချို့သော Forex EA ပံ့ပိုးသူများကသင့်အား EA system ကိုခွင့်မပြုမီအနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လိုအပ်သောအနည်းဆုံးအပ်ငွေကိုစစ်ဆေးရန်ဆိုက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် EA ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှသာသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ခန့်သာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောဆိုဒ်များတွင်ယင်းသည်အကြံပြုချက်မျှသာဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးသူသည်ဖောက်သည်များအားငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံကိုကမ်းလှမ်းပါက၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင်သင်နှင့်လိုက်ဖက်သော Forex EA software ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက MT4/5သို့ဖြစ်လျှင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားအပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
ယခုသင်သတိထားမိသည်နှင့်အမျှ EA တစ်ခု၏အလိုအလျောက်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မူကွဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်စဉ်တွင်သင်မည်မျှပါဝင်လိုသည်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
သင်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုလိုချင်ပါသလား။ အချို့သောကုန်သည်များက Forex EA ကို Forex စျေးကွက်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်း၊ လက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရောင်း။ ရောင်း ၀ ယ်သည်။
သင်ငွေထဲထည့်ပြီး EA ကိုအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်စေချင်လား။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချ၍ လုံးဝဘာမျှမလုပ်တော့ပါဟုဆိုလိုသည်။
၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်အချို့သောကုန်သည်များသည် EA ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအရေးယူသင့်၊ မလုပ်သင့်ဟုပြောဆိုလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် EA ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးမည့်အစားအချက်ပြမှုကိုစောင့်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်း / ရယူခြင်းအကျိုးအမြတ်အခြေအနေများကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့် Forex trading တွင်အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဆော့ဖ်ဝဲကမည်သည့်ကုန်သွယ်ပုံစံနှင့်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ရန် EA ပံ့ပိုးသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများအနက် forex EA ပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအချို့သည် cryptocurrencies သို့မဟုတ် PayPal ကိုသာလက်ခံလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ငွေပေးချေသူများသည် debit / credit cards ကဲ့သို့သောသမားရိုးကျငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုမရရှိနိုင်ခြင်းသည်သံချပ်ကာထဲ၌တကယ့်အမှားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ရွေးရန်ကာလသို့မဟုတ်ထုတ်ယူခြင်းကန့်သတ်ချက်များမရှိခြင်းကိုသေချာစေရန် forex EA ပံ့ပိုးသူ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရန်ကောင်းသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်က ၁၀၀% အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအထူးစဉ်းစားချက်ကသက်ဆိုင်နေတယ်။ ဆိုလိုတာကပံ့ပိုးသူကသူတို့စက်ရုပ်ကိုသူတို့ရွေးထားတဲ့ပွဲစားနေရာမှာတပ်ဖြန့်မယ်။
အချို့သော Forex EAs များသည်နေရောင်အောက်ရှိငွေကြေးအတွဲအားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်သည်။ အခြားသူများကိုအစုတခုအနည်းငယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်တ ဦး တည်းအတွက်သာအထူးပြုသွားရမည်။
သင်၏perfectlyုံသင့်လျော်သော Forex EA ကိုရှာဖွေရန်သင်စဉ်းစားရမည့်အခြားအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သင်ကြိုးစားပြီး ၀ င်လာသောငွေများကိုသင်စွန့်စားမည်ဟုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ပါအချက်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
EA သရုပ်ပြအကောင့်အတွက်အခြားကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာသင်၏အမှာစာအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲသည့်အခါ EA ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်သေးငယ်သောအမှာစာများသာဖြင့်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပြောင်းလဲမှုကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပေ
အကောင်းဆုံးသော Forex EAs များသည်ထိုအချက်များပေါ် မူတည်၍ တူညီလိမ့်မည်။
Forex EAs ရဲ့အန္တရာယ်ကိုခင်ဗျားတို့သတိထားမိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းများကိုပေး အချိန်မှန် simulated ရလဒ်များကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သောကြောင့်, ကုန်သွယ်ရလဒ်များကို။ တက်ကြွစွာကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုသည်ငွေလဲနှုန်းကိုပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက် Forex အရောင်းအဝယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Backtesting သည် Forex EA နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးဆုံးသောအချက်အလက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကွဲပြားသောစျေးကွက်အခြေအနေများတွင် EA software မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင့်အားကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ ဤသည်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုနှင့်စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများကဲ့သို့မက်ထရစ်ပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံး Forex EAs များသည်စျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ငွေကြေးအတွဲအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါ backtests များသည်အနိမ့်ဆုံးအနိုင်ရလဒ်များနှင့်အနိမ့်ဆုံးအကြိုဆုတ်ခွာမှု၊ အချို့သော Forex ပွဲစားများကသင့်အတွက်ဤစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်လိုကြသည်။
Forex EA ကြွေးမြီရာခိုင်နှုန်းကဘာလဲ?
အချို့သောကုန်သည်များသည်သတိကြီးစွာထားခြင်းကို ၅% သတ်မှတ်ထားပြီးအချို့မှာ ၁၅% အထိမြင့်မားသောသွားလာခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာလုံးဝဆင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရွေးချယ်မှုမှဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်များကိုကုန်သွယ်မှုအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်တိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Forex EA ဖြင့်မည်သို့စတင်ရမည်
Forex EAs ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုပ်လိုချင်တဲ့အသံလိုမျိုးလား။ သို့ဆိုလျှင် ယခုကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်း၌စတင်နိုင်ရန် Forex EA ပံ့ပိုးသူသို့မည်သို့မည်ပုံမည်သို့ sign up လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြသွားပါမည်။
အဆင့် ၁: Forex EA Provider ကိုရွေးချယ်ပါ
စတင်ရန်သင်ကုန်သွယ်ရန်သင်အသုံးပြုလိုသော Forex EA တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါကဤစာမျက်နှာကို ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံး Forex EAs များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ပါ
အချို့သော Forex EAs များသည်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးဖြစ်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုး၊ အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်ဆုံးရှုံးမှုများကိုရွေးချယ်သည်။
သင် Forex ဈေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် EA သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ EA သည်အလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်သင်ချက်ချင်းကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ထပ်မံ၍ အခမဲ့စမ်းချောင်း (သို့) သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခု၏အားသာချက်ကိုရယူခြင်းသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်၏ခြေကိုရှာရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့် ၃: ငွေသွင်းပါ
သင်ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရှေးခယျြ Forex EA အကောင့်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလက်ခံရရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း - သင်သည်အချို့သောရန်ပုံငွေများကိုထည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်ကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ လက်စွဲစာအုပ်ကိုရွေးပါကအရေးယူရန်လိုသည်။ သင်က 100% အလိုအလျောက်နဲ့ကပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းထိုင်ပြီးအနားယူနိုင်ပါတယ်။ Forex EA ပံ့ပိုးသူအများစုသည်ကုန်သည်များအားနောင်လာမည့်ရက်များတွင်ဤဆက်တင်များအားပြောင်းလဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
MetaTrader4/ MetaTrader5အတွက် Forex EA ကိုဝယ်ပါ
အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှ EA တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီး၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလျှင် - လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဖိုင်ကို MetaTrader4သို့မဟုတ် MetaTrader5သို့ upload တင်၍ Forex EA သည်ချက်ချင်းကုန်သွယ်လိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်သည်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းလိုအပ်ကြောင်းအမြဲဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင်၏နည်းဗျူဟာနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အနိမ့်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအမှာစာအရွယ်အစားအပြင်အခြားချိန်ညှိချက်များကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ဒီရွေးစရာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၎င်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာအောင် demo အကောင့်ထဲမှာဖွင့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုတယ်။
အသိအမှတ်ပြု Forex ပွဲစားကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
သင် MT4 / MT5 လိုအပ်သော Forex EA ကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါ - ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သော Forex ပွဲစားတစ် ဦး သို့သင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင့်အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။
Forex ပွဲစားသည်ဘုတ်အဖွဲ့အထက်တွင်ရှိကြောင်း၊ လိုင်စင်အပြည့်အ ၀ ရှိပြီးသင့်လျော်သောအဖွဲ့၏စည်းမျဉ်းကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ မည်သည့်တရားဝင် Forex ပွဲစားမဆိုသည်ရန်ပုံငွေခွဲခြင်းကဲ့သို့သောတင်းကြပ်သောလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်။ အမှန်ကတော့ပွဲစားဟာဖောက်သည်တွေရဲ့ရန်ပုံငွေကိုကိုယ်ပိုင်ကြွေးမြီတွေမပေးနိုင်အောင်တားဆီးပေးရမှာဖြစ်တယ်။
ပွဲစားများအားလုံးသည်ဖောက်သည်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြသည့်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများကိုတင်ပြရမည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖွဲ့များသည်ပေးထားသောအချက်အလက်များကိုစိစစ်သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏အမှု၌, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သင့်လျော်သောအကျိုးဆက်များအရေးယူရန်၎င်း၏ပိုင်ခွင့်အတွင်းကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် Forex ပွဲစားထိန်းညှိသူများများစွာရှိသည်။ လူသိများသောကိုယ်ခန္ဓာအချို့မှာ -
FCA: ဘဏ္Conာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
CFTC: ကုန်စည်နှင့် အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေး ကော်မရှင် (အမေရိကန်)
BaFIN: The Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ဂျာမနီ)
CySec: ဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission
အရေးကြီးသည်မှာ အကယ်၍ သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့် Forex ပွဲစားသည် tier-one လိုင်စင်ရအဖွဲ့ကမထိန်းချုပ်ပါက၎င်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
2021 ၏အကောင်းဆုံး Forex EAs
ထောင်ပေါင်းများစွာသောပံ့ပိုးပေးသူများမှာ“ အားလုံးသီဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်ခြင်း” Forex စက်ရုပ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကုန်သည်တွေကိုရိုးရာကုန်သွယ်မှုနဲ့ 'အမြန်ရအောင်' အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းကြတယ်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာသံသယမရှိသောကုန်သည်များကိုရှာဖွေရန်အတုနှင့်အတုကုမ္ပဏီများစွာကစောင့်နေကြသည်။
ထိုသို့ပြောပြီးနောက်တွင် Forex EA မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြdownနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သတိပေးခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုသင်ယခုသိပြီ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ထိပ်တန်း Forex EA ၅ ခုစာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
၁။ FX Fury
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ပိုမိုနာမည်ကြီးသော Forex EAs တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်မြင့်မားသောနည်းနာမဟာဗျူဟာများနှင့်အန္တရာယ်နည်းပါးသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ Forex EA သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ၇ ခုအထိငွေလဲနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာအရ FX Fury သည် M7 အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအချိန်ကန့်သတ်ချက်များကိုပြenfor္ဌာန်းသည်။
အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဤစက်ရုပ်သည်စျေးကွက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် FX Fury EA သည်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင်ဤစက်ရုပ် EA ပံ့ပိုးသူနှင့်သင်ကြိုက်သလောက်သီအိုရီများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လိုင်စင်တိုင်းနှင့်အကန့်အသတ်မရှိသရုပ်ပြသမှုများပေးသည်။
သင်သည်သင်၏ forex သုတေသနပြုရန်စက်ရုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်တောင်မှပံ့ပိုးသူသည်သင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ FX Fury EA တွင်၎င်းအတွက်အခြားအရာများလည်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်သည် FX Fury ကိုနေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအကောင့်များတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဤဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် Forex EA ပံ့ပိုးသူသည်ကုန်သည်များအတွက် ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိပါသည်။
အနိုင်ရရှိမှုနှုန်းမှာ ၉၃% ဖြစ်သည်။
ရလဒ်များကို Myfxbook မှတဆင့်အတည်ပြုသည်
FX Fury သို့သွားပါ
၂။ Forex Stream ၁၀
Forex Steam 10 သည် 100% အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ သင်ဤ Forex EA ကိုတော်တော်များများ download လုပ်နိုင်ပြီး box ထဲမှကုန်သွယ်မှုစတင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို Forex trading ဈေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုယူဆပါက၎င်းစက်ရုပ်ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်စီစစ်ခြင်းနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်သင်အကူအညီလိုသော Forex EA ကို သုံး၍ ကုန်သွယ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုကိုင်ထားနိုင်သည်။ Forex Steam EA သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငွေစာရင်းပိုများနေပုံရပြီးကုန်သွယ်ရေးအသိုက်အ ၀ န်းအကြားယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်အပြောင်းအလဲမြန်သောစျေးကွက်တွင်မည်သည့်အရာကမျှ ၁၀၀% သေချာသည်မဟုတ်ပါ။
အန္တရာယ်ကင်းသောလှည့်ကွက်တစ်ခုမျှမရှိသော်လည်းသစ္စာရှိဖောက်သည်များများစွာရှိခြင်းသည်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သည်များကိုပျော်ရွှင်စေရန်သေချာသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မွမ်းမံမှုများ (အားလုံးအခမဲ့ဖြစ်သည်) ကိုပေးသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီလေလေအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်သည်။
ဤတွင် Forex Steam 10 EA တွင်ပါဝင်သောအချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအချို့ -
အန္တရာယ် - ဆုချီးမြှင့်အတည်ပြုရလဒ်များကိုအပေါ်ချိန်ညှိ
စျေးနှုန်းတစ်ခု - အမျိုးမျိုးသောဗားရှင်း
တစ်နေ့လျှင်သုံးစွဲသူ ၃၀၀၀ ကျော်
'max spread' သုံး၍ မကောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုရှောင်ခြင်း
အဓိကစျေးကွက်နောက်ပိုင်းတွင် 2021 အဘို့ပြင်ဆင်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ကုန်သွယ်မှုအစုစုကိုတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလိုသောကုန်သည်များအတွက် 'Forex Steam 10 EA light' ရှိသည်။ ဤ Forex EA သည်စျေးကွက်ရှိငွေထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်အသစ် ၃၀၀၀ ကိုနေ့တိုင်းဆွဲဆောင်ရန်တောင်းဆိုသည်
Forex Steam 10 သို့လာရောက်ပါ
၃။ Binary Strategy Forex စက်ရုပ်
လက်တွေ့ဘ ၀ ကုန်သည်များနှင့်ကုဒ်သမားများသည်ဤ Binary Strategy Forex EA ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းဤ forex EA သည် binary options market တွင်အာရုံစိုက်သည်။ ဒါဟာ binary options စျေးကွက်လိမ်လည်သူများအထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ကြောင်းပြောခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကသင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စျေးကွက်တစ်ခုဆိုရင်ကတိကဝတ်မပြုမီသတိထားပါ။ ဤ Forex EA သည်မတူကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံသည့်နည်းဗျူဟာ ၂ ခုကိုထောက်ပံ့သည်။
မဟာဗျူဟာနှစ်ခုမှာ 'ခွန်အား' နှင့် 'စိတ်ဓာတ်' ဖြစ်သည်။ အချို့သော Forex EA ပံ့ပိုးသူများနှင့်မတူဘဲ Binary Strategy Forex သည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစျေးနှုန်းတစ်ခုအတွက်ပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပွဲစားအများစုသည်ဤနည်းဗျူဟာများကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ သင် binary options များသွားသည်အထိသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်းအချို့သော forex EA ဒီဇိုင်နာများသည်ရလာဒ်များကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် Myfxbook (တတိယပါတီစမ်းသပ်မှုဆိုဒ်) သည်ဤရလဒ်များကိုလက်ခံခွင့်မရှိပါ။
Binary Strategy Forex EA သည်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းတွင် MT4 တွင်အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ software ကိုသူတို့မကုန်မှီနှစ်နှင့်ချီ။ အပြည့်အဝစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဤ Forex EA မှသင်မျှော်လင့်သင့်သည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Forex စက်ရုပ်အမျိုးအစား: Binary Options
စျေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်
M15 အချိန်အပိုင်းအခြား (သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် ၁၅ မိနစ်)
ပျမ်းမျှ 70-95% အနိုင်ရရှိနှုန်းကို
ထက်နည်း $ 200 ၏စျေးနှုန်း
မည်သည့်လက်ရှိ pair တစုံကုန်သွယ်နိုင်
ပျမ်းမျှအနိုင်ရရှိနှုန်းအကြား 70% -95%
ဤ Forex EA သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ရှိပြီးကုန်သည်များသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀၀ အထိအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ Rita Lasker (ကျော်ကြားသော Forex ကုန်သည်) သည် Forex Astrobot ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤ MetaTrader16,000 Forex EA သည်မတူညီသောအချိန်ကာလများဖြစ်သော M4, M15 နှင့် H30 ကဲ့သို့သောကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုရန်ခွင့်ပြုပြီးငွေကြေးအတွဲအများစုကိုပါအကျုံးဝင်သည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုမဆိုအီးမေးလ်၊ MT1 ပေါ်လာသောသတိပေးချက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း push သတိပေးချက်သုံးမျိုးဖြင့်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ဤ Forex EA တွင်ငွေထည့် ၀ င်သည့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်အခြေအနေများကသင့်မျက်နှာသာရသောအခါသင်၏ပမာဏကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့လျှင် forex EA တွင် 'slippage' ဟုခေါ်သော built-in algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ tool သည်မှားယွင်းသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ Forex ကုန်သွယ်မှုသို့မသွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
စျေးကွက်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဤ EA ရှိ TakeProfit အင်္ဂါရပ်သည်အမြတ်အစွန်း (၃) ခုအထိရရှိနိုင်သည်။ Forex Astrobot EA တွင်ထုတ်ကုန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းအောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
ပျမ်းမျှအနိုင်ရရှိနှုန်း ၈၀% အထိ
M15, M30 နှင့် H1 အချိန်အပိုင်းအခြား
ကုန်ကျစရိတ် - ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀ (“ အပြီးသတ်မူ” အတွက်)
သင်သည်ဤ Forex EA ကို ၀ ယ်ပြီးမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်မကြိုက်ပါကရက် ၃၀ အတွင်းငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ကိုအသုံးချပြီးပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနိုင်ရရှိနှုန်း ၈၀% အထိရှိသည်။
Forex Astrobot သို့သွားပါ
5. Robomaster အီးယူ
Robomaster EU သို့သွားပါ
အကောင်းဆုံး Forex တိုး: နိဂုံးချုပ်၌
အဓိကအချက်မှာ Forex EAs များသည်လက်ချောင်းများကိုမမြှောက်ဘဲကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဇယားများနှင့်သုတေသနများကိုလနှင့်ချီ။ နားလည်ရန်လိုအပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုရှိသည့် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်နှစ်များစွာကြာနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်သို့အလွယ်တကူရောက်ရှိရန်အသစ်ရောက်လာသူများသည် Forex EAs သို့ပြောင်းလဲသွားသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သော EA ကိုရိုးရိုးလေး download လုပ်ပြီးသင်အတွက် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လည်းလှည့်ကွက်တစ်ခုမပျောက်သေးပါ။ ဆက်တင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် EA ကို semi-automated လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤလိမ္မာပါးနပ်သော algorithmic software သည်ရှိပြီးသား Forex trading မဟာဗျူဟာအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာအခမဲ့စမ်းသပ်မှုများ၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့် demo အကောင့်များအားလုံးကိုအပြည့်အဝရယူခြင်းသည်သင်၏ခြေထောက်များကို forex EA နေရာတွင်ရှာ။ မရခင်မှာရှာဖွေရန်ယုတ္တိနည်းဖြစ်သည်။
အကောင့်တစ်ခုတည်းတွင် Forex EA တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Forex ပွဲစားအများစုသည်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုတည်း၌တစ်ခုထက်ပိုသော Forex EA ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်ပလက်ဖောင်းနှင့်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
Forex EA ကိုသုံးသောအခါလစဉ်အခကြေးငွေပေးရမလား။
ဤအဖြေသည်သင်ရွေးချယ်သော Forex EA ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့သော EAs များကိုထုတ်ကုန်အတွက်တစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖောက်သည်အထောက်အပံ့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာကော်မရှင်အခြေပြုထားသည့်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။
Forex EA အကောင့်နှင့်ကုန်သွယ်ရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေလိုအပ်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်အပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်ထုတ်ယူထားသောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နေပါက Forex EA ပံ့ပိုးသူအများစုတွင်အနည်းဆုံးငွေသွင်းနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်သည့်ပံ့ပိုးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ သင် MT4 /5နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Forex EA ကိုသင်ဝယ်ယူပါကအနိမ့်ဆုံးသိုက်အားသင်၏ပွဲစားရွေးချယ်သူကဆုံးဖြတ်သည်။
Forex ပွဲစားတစ် ဦး သည်တရားဝင်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ဥပမာယူကေတွင် Forex ပွဲစားများအားလုံးသည် Financial Conduct Authority (FCA) မှလိုင်စင်ရရန်လိုအပ်သည်။ ဤလိုင်စင်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသောမည်သည့် Forex ပွဲစားကိုမဆိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ဤသည်ကသင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများကိုရန်ပုံငွေခွဲထားခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ယူကေပြင်ပရှိအခြားလိုင်စင်ရအဖွဲ့များသည် MAS, CySEC နှင့် ASIC တို့ဖြစ်သည်။
ငါမနှစ်သက်ရင် Forex EA ကိုဖျက်သိမ်းလို့ရသလား။
ဒါက Forex EA platform ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့သောပံ့ပိုးပေးသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံကိုပေးသည်။ အခြားသူများက EA ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်အခမဲ့သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုများကိုသာပြုလုပ်သည်။